FISOLOKIANA : Telo mianadahy efa nahazo 160 tapitrisa Ariary nadoboka am-ponja vonjimaika
Lehilahy iray sy vehivavy miisa roa no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny boriborintany fahaenina tamin’ny alatsinainy 03 sy talata 04 jona, teny Andraharo, Antsahavola sy Andoharanofotsy noho ny resaka fisolokiana sy fampiasana tombokase hosoka. 18 juin 2019
Naharay antso avy amin’ny olona tsara sitrapo ny Polisy miasa ao amin’ny boriborintany fahaenina ity fa misy lehilahy iray ahiana ho misoloky olona ao amin’ny “Accèss banque” eny Antsahavola. Nidina avy hatrany teny an-toerana nanamarina izany trangan-javatra izany ny Polisy ka tratra ambodiomby ilay lehilahy, niaraka tamina taratasy hosoka hakana vola mitentina 40 tapitrisa Ariary. Nentina avy hatrany tany amin’ny birao ny tenany nanaovana fanadihadiana ka tamin’izay no nanoroany ireo namany mpiara-manao io asa ratsy io. Vehivavy miisa roa izay mipetraka eny Andoharanofotsy eny ka teny Antsahavola no voasambotry ny Polisy tamin’izany.
Tamin’ny fanadihadiana natao tamin’izy ireo no nahalalana fa ireo roa vavy ireo no mpanome ny mombamomba feno ny olona hosolokiana sy ny antontan-taratasy fanaovana izany. Rehefa natao ny fisavana ny toeram-ponenan’izy telo ireo dia nahitana tombokase marobe fampiasany hanamboarany ireo karapanondro hosoka, titra, fakitiora hosoka … .
Eny amin’ny Accèss banque Antsahavola eny no tena fanaovany ity asa ratsiny ity raha ny tatitra voaray hatrany ary efa maro no efa voany, vola mitentina 160 tapitrisa Ariary ny vola efa azony ary efa nividianan’izy ireo fiara sns izany vola izany. Notazomina vonjimaika eny am-ponja izy telo ireo amin’izao fotoana izao.